Kids hadalka Back Dhab ahaantii waa wax fiican,! | SmartKidParenting.com
Kids hadalka Back Dhab ahaantii waa wax fiican,!
Ka hor inta aadan odhan “Hel outta halkan!” ama Jidka No!” marka hore la akhriyo post dhan, tan iyo bilowgii ilaa dhamaadkii aad.
Sure, marka carruurtu ka hadleynaa dib aad ugu, aad camal qaadataa in ka badan, waana wax aad u adag in ay is dajiyaan. ma u ekaan kartaa in aad baadhi in this yar qabka xitaa uu leeyahay dareemaha si aad u doodid. Sidaas si ay u bilaabaan off, Waan ogahay sida qosol ah waxaa codadka.
Si kastaba ha ahaatee, markii aad akhriday sababaynta ka dambeeya fikradda, aad ugu danbeyn maqsuud doonaa in hadalka dib uun u wanaagsan kids aad waxaa laga yaabaa in.
Child Psychologist Kelly M. Flanagan, qoray in uu blog that he’s secretly happy that his kids say no to him every now and then. Wuxu sheegay in ay jiraan waxyaabo gaar ah nolosha in aan u baahanahay in hoos ay u, oo wax badan oo dhaqanka on sidaas samaynaya — xitaa haddii ay ka dhigan tahay isagoo leh u lahayn in ay wax cunaya khudaar ama xirayaan uu suunka on — waxaa lagama maarmaan ah.
“Maxaa yeelay runta waa, run ahaantii ma aad odhan kartaa 'Haa’ ilaa aad ka dhihi karaa 'No.’ Waxaan u baahanahay inaan ognahay inaan u leedahay inaad doorato in nolosha. Xorriyadda in la yidhaahdo 'No’ [ama “No mahadsanid” sidii aan door bidaan] waa bilowga ugu horreeya ee awoodda aan u leenahay in la yidhaahdo 'Haa.’ nafteena Si. Si aad nolosha. Iyo in ay jecel yihiin,” he writes. He adds that kids should learn how to talk back in a “ammaan, jawi taageero” — guriga.
Dabcan, daynin ilmahaaga dib hadli macnaheedu ma aha waxay ku yidhaahdeen haa isaga si waqtiga oo dhan. ilmaha A sii kordhaya baahan yahay in xuduudaha.
Waxa uu u baahan yahay in uu barto sida la isugu tanaasulo oo ay aqbalaan in uu jidkiisa ma qaadan. Waa dhan ah oo ku saabsan dheelitirka, waana habka a waa in adiga iyo ilmahaaga labada shaqeeyaan sidii ay koraan.
Research ayaa sidoo kale taageeray inuu dhibic. A 2011 daraasaddan oo lagu daabacay wargeys ka Horumarinta Carruurta muujinaysaa in doodaha lama huraan u dhexeeya waalidka iyo caruurta, gaar ahaan tweens iyo dhalinyarada, uusan ka faa'iideysan ilmo mustaqbalka fog.
Laakiin ma ahan nooc qaylo-ama-tuuro-walax of Xujada; badan oo dood, run ahaantii.
author waxbarasho Lead Joseph P. Allen sheegay wareysi uu siiyay NPR, “Waxaan ogaaday in waxa dhallintaada a bartay maareeynta noocyada kala duwan ee khilaafka waalidkood ahaa dhab ahaan waxa ay ka soo qaadeen dunida faca ay galeen.”
The kids kuwaas oo bartay xirfadaha gorgortanka habboon in xawaal, ururiyay, iyo hab kalsooni codsatay farsamo isla marka la saaxiibadood ka qabashada. Waxay si fudud ma jahwareerin ama riixay badan.
Allen oo muujinaysa in ay waalidiinta ka fekeraan doodaha kuwa aan sida buuqa laakiin sida tababar ah fekerka muhiimka — something the child can use later in life when he or she is presented with things that he should really say no to, sida daroogada ama khamriga, iyo dabeecad halis.
Wixii kids si ay u koraan caafimaad qaba, dadka waaweyn madax banaan, ay u baahan yihiin si ay u bartaan xirfada ee diidan, ama dib u hadlaya hore. Waxay u baahan yihiin in ay bartaan sida ay codkooda ay dareen, fikirrada, ama fikrado, oo ay bartaan sida loo sameeyo go'aamada iyaga u gaar ah.
Waxaan isku dayaa in aan la dhayalsan gaarin our. We talk to them and try to help them express how they feel about stuff, sida xeerarka aan soo rogi. Sidaas, they feel included in the decision making.
Laakiin waxa aad samayn karto, marka laga hadlayo dib u jirsado fool xun?
Waa dareen ah, Waxaan dhihi lahaa. Waad og tahay markii sababaynta carruurtaada gudbo xadka u dhaxeeya taagan kor naftooda ama ixtiraam. mararka qaarkood eed waxaa ka mid ah ayaan ahay, aad. Waxaan mararka qaarkood si ay u ogaadaan sida aan ka jawaabin iyaga. First, dego oo markaas u sharax in ay fikirradooda ii sheegi kartaa aan fiicnayn ama ixtiraam.
Sidaas marka xigta ilmahaaga meel kaga dhacay maamulka, tallaabo dib u qaadaan, iyo xusuuso in ay xirfad uu u baahan yahay. Markaasuu, ka hor tago oo isaga caawin. xusa, yaryarkan bartaan by tusaale ahaan, aad!
November 6, 2013. "Sababta The kasta Kid habboonayd Back hadal Waalidiinta waxay" (huffingtonpost.com)
January 3, 2012. "Waa maxay sababta Teen A yaa kula hadlaa Back laga yaabaa Future A Bright" (npr.org)